आफू पनि घरबाहिर ननिस्कनु, अरुलाई पनि घरमा आउन नदिनु’ – News Portal of Global Nepali
आफू पनि घरबाहिर ननिस्कनु, अरुलाई पनि घरमा आउन नदिनु’
24/03/2020 मा प्रकाशित
कोरोना भाइरसका कारण अहिले विश्व त्रस्त छ । बेलायतमा मात्र यो पंक्ति तयार पारिरहँदा सो भाइरसका कारण ३३५ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने ६ हजार ६५० मा सो भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । हालसम्म यो भाइरसको उपचार पत्ता लागेको छैन तर यो रोग लाग्न नदिन विभिन्न उपायहरु चिकित्सक, वैज्ञानिक र सरकारले जारी गरेका छन् । ती उपायहरु र नेपालीहरुले कसरी सजगता अपनाउने सम्बन्धमा बेलायतको लिभरपूलमा कार्यरत जनरल प्राक्टिसनर (जीपी) तथा नेप्लिज डक्टर्स एसोसियशन युकेका सदस्य डा. मनोहर बुढाथोकीसंग नेपाल पत्रकार महासंघ युकेका अध्यक्ष नरेश खपांगीले गरेको कुराकानी:
आइसोलेसनमा बस्दा हीनताबोध, लघुताभाष मान्नु जरुरी छैन । आइसोलेसनमा भनेको आफू पनि बच्नु र परिवारलाई पनि बचाउनु हो । अहिले ज्यान बचाउने बेला हो । यदि एक÷दुई हप्ता आइसोलेसनमा बस्दा ज्यान बच्न सक्छ भने किन संकोच मान्ने ? यो भाइरसबाट के वृद्ध के जवान सबैलाई असर परिरहेको छ । बयोवृद्धहरुलाई धेरै नै प्रभाव परेको छ तर भर्खरका युवाहरु पनि अहिले गम्भीर अवस्थामा आइसियुमा उपचाररत छन् । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो यो रोगको उपचार अहिलेसम्म पत्ता लागिसकेको छैन । त्यसैले समाजमा यो भाइरस फैलन नदिन त रोग लाग्नै नदिनु पर्यो नि । अस्पतालले थेग्न सके बाँच्न सकिएला तर सबैलाई एकैपटक च्याप्यो भने अस्पतालमा पनि भर्ना नपाइन सक्छ । त्यसैले समयमै सचेत बनौँ र असजिलो नमानी आइसोसेलनमा बसौँ । अर्कोतर्फ कतिपय नेपालीमा सरकार र स्वास्थ्यकर्मीले दिएको सुझाव अटेर गरी ‘मदर्स डे’मा वृद्धावस्थाका आमासित भेटेको पनि पाइयो ।